Blog | SUNDEW MYANMAR
ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရှိ Customer ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်အတွက် IT Products များ ရေးဆွဲပေးထားသော Company တစ်ခုဖြစ်သည်။
COVID 19 ဒုတိယလှိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ရောဂါကူးစက်မှု မြင့်မားလာသည့်အတွက် SUNDEW MYANMAR မှ ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးကို အထူးအလေးထားသောကြောင့် ၂၀၂၀ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှ စ၍ SUNDEW MYANMAR ဝန်ထမ်းများအားလုံး
Project Manager - ဒီ data နဲ့ file တွေက အရေးကြီးတယ်။ ပြီးတော့ လိုအပ်တဲ့အချိန် လွယ်လွယ်ကူကူ ယူလို့ရအောင် cloud ‌ပေါ်တင်ထားလိုက်ပါ 💿 🖥️
SUNDEW MYANMAR နှင့် Linn Myanmar Healthcare တို့ eCommerce Mobile Application ရေးဆွဲနေမှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေး။ #sundewmyanmar #linnmyanmarhealthcare #ecommerce #mobileapp #myanmar
ယခု video လေးကတော့ Linn Myanmar Healthcare အတွက် SUNDEW MYANMAR မှ develop လုပ်ပေး‌နေသော Online Purchasing System တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို customer များအတွက် ရိုးရှင်းလွယ်ကူ၍
POS system တစ်ခုကို သင့်ရဲ့ Mobile Phone, Tablet နှင့် POS Machine ပေါ်မှာပဲ လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် SUNDEW MYANMAR က သင့်အတွက် အဆင့်သင့်ရှိနေပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရန်
SUNDEW MYANMAR updated their cover photo.
ယခုလို ကာလမှာ သင်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ အရောင်းအဝယ် မလုပ်ရလို့ စိတ်ညစ်‌မနေပါနဲ့။ ဝယ်သူအများစုဟာ အပြင်မထွက်နိုင်ပေမယ့် အင်တာနက်ပေါ် ကနေ ဈေးဝယ် ထွက်နေကြတယ် ဆိုတာ သင်သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ယခု ချက်ချင်း သင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အင်တာနက် ပေါ်
SUNDEW MYANMAR ကရေးပေးထားသော Messenger Bot System လေးပါ။ အကယ်၍ သင့်လုပ်ငန်း ကို Facebook Messenger Bot တစ်ခု တည်ဆောက်ပြီး အရောင်း မြင့်တင့်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ် ဆိုရင် SUNDEW
SUNDEW MYANMAR is at .
Free & Open Soure System of SUNDEW MYANMAR. github.com/SundewMyanmar #oss #free #adminpanel
SUNDEW MYANMAR ရဲ့ Master Framework ဆိုတာ - master-api => RESTFul API System (Spring Boot) - master-panel => Web Panel (React
It was in 2011,asmall but creative and motivative team , started to create cool IT products in aim of "Rock the World". - SUNDEW MYANMAR
We are Hiring. Position : Oracle DBA Contract Duration :3Months Basic Job description to understand the skill level
မေး : COVID-19 ကြောက်တဲ့ မင်းရဲ့ TGIF ကဘယ်လိုလဲ?
“ဝူဟန်ရှောင်ပြီး စျေးရောင်းမယ်” COVID-19 အဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကို ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအဖြစ် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော WHO (World Health Organization) မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် သတ်မှတ်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ
“ညောင်ရွှေကဟိုတယ်လှလှလေး Blue Vanda ကို www.blue-vanda.com ကနေတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။” လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော Website များကို SUNDEW MYANMAR မှ တာဝန်ယူစီစဉ်ရေးဆွဲပေးနေပါပြီ။ SUNDEW MYANMAR �www.sundewmyanmar.com info@sundewmyanmar.com 09420020355,018604303 �No.20(3rd
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် Website တစ်ခုကို 33.3 $ တည်းနှင့်တည်ဆောက်လိုက်ပါ။ ဆက်သွယ်ရန် SUNDEW MYANMAR 09 2543 78 203, 09 4200 20 355, 01 860 43
မြန်မာပလာဇာ Food City နဲ့ မြောက်ဒဂုံ ဦးဝိဇာရလမ်းပေါ်ရှိ Bluebird Food & Entertainment Complex တို့၏ ပဲ့ကိုင်ရှင် ဖြစ်သော Kreate Holdings ၏ Website (kreatefood.com/) ကို
လွှတ်တော်ရဲ့ လတ်တလောအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို www.openhluttaw.info မှာဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ပွင့်လင်းလွှတ်တော်အတွက် နည်းပညာပိုင်းကို SUNDEW MYANMAR ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ SUNDEW MYANMAR ဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Information Technology Company တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဘာတွေဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားပြီလဲ? #NowandThen #SUNDEWMYANMAR
Office Staff အလိုရှိသည်။ Company Information -SUNDEW MYANMAR သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော Information Technology Company တစ်ခုဖြစ်သည်။ -နိုင်ငံတကာတွင် စီးပွားရေး၊ လှုမှုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင်
ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေများလွန်းတဲ့ မျက်မှောက်ခေတ်ကြီးမှာ ပြိုင်ဘက်တွေထက်အစစအရာရာခြေတစ်လှမ်းသာနေဖို့ဆို�အရင်ကထက်ပိုပြီးကြိုးစားဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုပေမယ့် သက်ရှိလူသားတွေဖြစ်တဲ့ ဝန်ထမ်း တွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အလုပ်ချိန်ထက်ပိုပြီး 24/7 အလုပ်လုပ်စေဖို့ဆိုတာကတော့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကို 24/7 လည်ပတ်နေစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ SUNDEW MYANMAR ကိုဖုန်းလေးတစ်ချက်သာဆက်လိုက်ပါ။ -ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းမြင့်တင်ရေး�� -ဝန်ဆောင်မှုကောင်းမွန်ရေး�� -ဝန်ထမ်းရေးရာ��
February 14 ဟာ Valentine’s day ပါ။
မနက်ဖြန်ဆိုရင် ချစ်သူစုံတွဲတွေအတွက်တော့ အပြန်အလှန်လက်ဆောင်တွေပေးကြ ၊ ရုပ်ရှင်အတူကြည့်ကြ ၊ ညစာအတူစားကြနဲ့ ကြည်နူးစရာဖြစ်နေမှာပါပဲ။
Valentine မှာ Single ဖြစ်နေလို့လည်း စိတ်မညစ်စရာမရှိပါဘူး။
မိမိရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုဟာ မိမိနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တာမို့ ချစ်သူမရှိလည်း တစ်ယောက်တည်းအဆင်ပြေနေကြသူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ယောက်တည်းအဆင်ပြေနေသော်ငြား နှစ်ယောက်ဆိုပိုပြည့်စုံနိုင်မယ်ဆိုပြီး ချစ်သူရှာဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့ Single လေးတွေအတွက် ၂၀၂၀ မှာ အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ Dating App လေး ၅ ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်မို့ အခုပဲ Single လေးတွေကို Mention ခေါ်လိုက်ရအောင်။
SUNDEW MYANMAR updated their profile picture.
ကမ္ဘာကြီးမှာ အင်တာနက်အသုံးပြုသူ ဦးရေဟာ တစ်စက္ကန့်ကို ၁၁ ယောက် (တစ်နည်းအားဖြင့်) တစ်ရက်ကို လူဦးရေ ၁ သန်းနှုန်းနဲ့ တိုးတက်လျက်ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းနီးပါး အင်တာနက်ကို မက်မက်စက်စက် အသုံးပြုလာကြပြီး Mobile Phone တစ်လုံးရဲ့ ဖန်သားပြင်လေးကနေ
ဝန်ထမ်းအလိုရှိသည်။ Company Information -SUNDEW MYANMAR သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော Information Technology Company တစ်ခုဖြစ်သည်။ -နိုင်ငံတကာတွင် စီးပွားရေး၊ လှုမှုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် နည်းပညာကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်
"အရောင်းဝန်ထမ်း(၂)နေရာ ခေါ်ယူခြင်း" About Us -SUNDEW MYANMAR သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော Information Technology Company တစ်ခုဖြစ်သည်။ -နိုင်ငံတကာတွင် စီးပွားရေး၊ လှုမှုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် နည်းပညာကို
SUNDEW MYANMAR is with Htoon Lin at .
This morning , Mr.CEO shared SUNDEW Master Framework4and New Project Management Structure with our Tech Geek Team. WELCOME
SUNDEW MYANMAR updated their status.
No.20, 3rd Floor, 148th Street, Tarmwe, Yangon.
+9518604303,+9594200 20 355
SUNDEW MYANMAR © 2011-2020